RN7- Mandalahy: sprinter nivarina tanaty hantsana, efatra namoy ny ainy, maro naratra | NewsMada
RN7- Mandalahy: sprinter nivarina tanaty hantsana, efatra namoy ny ainy, maro naratra
Tao Mandalahy, 30 km alohan’ny hidirana an’i Fianarantsoa, ny nitrangan’ny lozam-pifamoivoizana nahatsiravina, ny asabotsy maraina teo, ity. Nivarina tanaty hantsana lalina ity taksiborosy Sprinter iray ka mpandeha efatra ny maty teo no ho eo, ankoatra ireo naratra maro.
Fiara Sprinter, taksiborosy kaoperativa Mafio, saika hamonjy an’i Toliara ny niharan-doza tany Mandalahy ,30 km eo ho eo tsy hidirana an’i Fianarantsoa, tokony ho tamin’ny 6 ora 30 mn maraina. Olona efatra ny maty teo no ho eo, ary maty tany amin’ny CHU Tambohobe ny vehivavy bevohoka iray. 13 ireo naratra tonga tany amin’ny hopitaly ka enina lahy, fito vavy.
Araka ny fitantarana mpandeha iray nipetraka teo aloha, nisy kamiao nifanena tamin’izy ireo, kanjo nisy Sprinter hafa mavomavo nipoitra nisongona ilay kamiao. “Hany herin’ilay mpamily nitondra anay, niala ny fifandonana tamin’ilay Sprinter mavomavo kanjo hantsana ny tany amin’ny ankavanana ka nivadibadika tany izahay”, hoy ny fitantarana.
Anisan’ny nieren-doza ny olona iray antsoina hoe Behavitsa. Tsy salama hatraty Antananarivo izy io, ary nalefan’ny havany ka hajanona any Sakaraha. Manao antso amin’ireo fianakaviany izy mba haka azy ao amin’ny CHU Fianarantsoa fa tsy misy mpikarakara.
Anisan’ny namoy ny ainy kosa ny pasitera Herizo avy amin’ny fiangonana FPMM. Izy ity izay saika hamonjy fiofanana any amin’iny faritra atsimo iny. Toy izany koa i Hasim James Brown, mpanao mozika rap, anisan’ireo namoy ny ainy tamin’ilay lozam-pifamoivoizana. Saika hamonjy any Fianarantsoa ity mpanakanto ity izao niandaosin’ny fahafatesana izao.
Amin’ny ankapobeny, vokatry ny tsy fitandremana ataon’ireo fiara mpitatitra ny mahatonga ny loza eto amintsika. Ny ankamaroan’ireo taksiborosy mamoa-doza, hamoizana ain’olona. Tsy tonga ao an-tsain’ny mpamily fa ain’olona ny lalaovina, ary ao anatin’ny minitra vitsy monja izao ahafatesana olona izao.
Tompon’andraikitra amin’ny ain’olona ny mpamily, ary tsy tokony ho afa-maina. Tsy vitan’ny raharaham-pihavanana fotsiny satria mafy amin’ny havan’ny maty ny namoy ny olona akaiky azy. Tompon’andraikitra amin’ny kolikoly amin’ny fahafahan’ireny mpamily nahavita nahafaty olona ireny ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana. Andrasana ny raharaham-pitsarana amin’ity loza ity.